Inguquko yesithathu kwimizi mveliso | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Adriana | | Uqoqosho lwaseKhaya, Umoya ovuselelekayo
Las Uhlaziyo kwimizi-mveliso ziinkqubo zembali nezentlalo ezitshintsha indlela okuninzi ngayo impucuko amandla.
Indoda ifuna amandla ukuze ikwazi ukwenza eyona misebenzi ibalulekileyo kwaye ukusukela oko yafumanisa imithombo eyahlukeneyo iguqukile yaphucula inqanaba layo lobuchwepheshe.
Utshintsho lokuqala kwimizi-mveliso yaba amalahle, inguquko yesibini yayingu umbane isekwe kwi- petroleum kwaye eyesithathu kukusetyenziswa amandla ahlaziyekayo njengemithombo yamandla.
Olu luvo luphuhliswe ngusosayensi wezoqoqosho uJeremy Rifkin okholelwa ukuba ekuphela kwendlela yokuphucula inkqubo yezoqoqosho kwihlabathi kukutshintsha iifosili.
Uqoqosho lwehlabathi alusasebenzi, belusoloko lunokungafezeki kodwa ngoku lufikelela kumda wokuzinza ngenxa yamanqanaba aphezulu kakhulu endlala nokungalingani emhlabeni, amaqondo aphezulu ongcoliseko kunye nokutshatyalaliswa okukhulu kwabo bonke oovimba bendalo beplanethi.
Eyona ibangela iingxaki ezibi zokusingqongileyo kodwa eyona iqondwayo yile kutshintsha kwe mozulu kodwa ingenguye yedwa.
Amazwe kufuneka acebise kwaye ancedane omnye nomnye afezekise uguquko kwimizi-mveliso entsha esekwe amandla acocekileyo ivuseleleke, evumela ukukhula koqoqosho kwexesha elide.
La Itekhnoloji eluhlaza isetyenziswe kuzo zonke iintlobo zeemveliso kubalulekile ukunciphisa inqanaba inkcitho yamandla kodwa ungcolise kancinci.
Utshintsho lwesithathu kwimizi-mveliso kufuneka lukhuthaze Uqoqosho oluphantsi lwekhabhoni.
Uqoqosho lulibele ukuba kufanele ukuba lube kwinkonzo yomntu kwaye lungamthobeli, kubalulekile ukufezekisa utshintsho lwefilosofi kunye neengcinga zobuchwephesha ukufezekisa inguquko eyinyani evumela wonke umntu ukuba abandakanywe kwinkqubo.
Njengoko kunokubonwa kuyo yonke imbali, ezi mbini zangaphambili zazisoloko zisekwe kukungalingani kwezentlalo, ezimbalwa zininzi kwaye uninzi lunokuncinci okanye akukho nto.
Las amandla ahlaziyekayo Isinika ithuba lokutshintsha size sihlengahlengise inkqubo yezoqoqosho ukuze ibe nokusesikweni, ilingane kuzo zonke iindawo zoluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Inguquko yesithathu kwezamashishini
Ukonga umbane kumazwe ahambele phambili